कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुभयो ? मेथि र दही मिसाएर लगाउनुहोस्, नतिजा आफै देख्नुहुनेछ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुभयो ? मेथि र दही मिसाएर लगाउनुहोस्, नतिजा आफै देख्नुहुनेछ
काठमाडौँ । मेथी भान्सामा नियमित प्रयोग हुने मसला हो । मेथीलाई बहुगुणी खाद्यपदार्थका रूपमा लिने गरिन्छ। यसलाई खाँदा स्वास्थ्यमा र प्रयोग गर्दा मुहार एवं कपालको सुन्दरता एवं चमक दिन्छ । मेथीका धेरै फाइदा छन्।यसलाई कपाल सुन्दर र चम्किलो बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेथीले चाया हटाउन पनि मद्दत गर्छ ।
मेथीको दानामा कपाललाई मजबुत गर्ने क्षमता हुन्छ। यसमा प्रोटिन र निकोटिनिक एसिडको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरलाई पनि ऊर्जा दिन्छ।यसको पेस्ट बनाएर नरिवल वा जैतुनको तेल मिलाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झर्न कम हुन्छ, साथै मुलायम र चम्किलो पनि देखिन्छ।मेथीको दानामा कपाललाई मजबुत गर्ने क्षमता हुन्छ। यसमा प्रोटिन र निकोटिनिक एसिडको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरलाई पनि ऊर्जा दिन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा मेथी सरल घरेलु उपाय हो। मेथीमा दही मिसाएर पेस्ट बनाउनुस् र यसलाई कपालको जरासम्म पुग्ने गरी लगाउनुस्।अलिअलि मसाज गर्दा पनि राम्रो मानिन्छ । यसरी लगाएको करिब ३० मिनेटपछि सफासँग पखाल्नुहोस् । तपाईंको कपालमा भएको चाया सफा हुन्छ।साथै छाला र कपाललाई पनि सुन्दर बनाउँछ। कम्तीमा महिनामा तीनपटक यो पद्दति अपनाउनुभयो भने चायाबाट हुने समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ।